Na-adọ XNUMX: Osisi Kusaikire-Keiaki Anzai
June 2020th (Tuesday) - Septemba 6nd (Tuesday / ezumike), 16
Na nke mbụ, anyị ga-ewebata osisi ndị na-ese ihe osise ndị Japan bụ Hiroaki Anzai, bụ onye gụrụ akwụkwọ n'okpuru nna ukwu Ryuko Kawabata.
Osisi nke Enlightenment dọtara siri ike, dịghachi-azụ ma jupụta n'ike.
Biko nwee ekele maka iku ume nke ahịhịa juru na patina.
Hiroaki Anzai "Agbahapụ Ogige" 1931
Agbahapụ ogige Hiroaki Anzai 1931 afọ 181 × 167 Ihe osise Japanese
Engawa Hiroaki Anzai 1929 afọ 186 × 167 Ihe osise Japanese
Dahlia Hiroaki Anzai 1947 afọ 135 × 180 Ihe osise Japanese
Ugbo nri Hiroaki Anzai 1944 afọ 175 × 360 Ihe osise Japanese
Oge nke abuo: ujo okike
2020 Mee (Tọzdee) - Ọgọst 9th (Sọnde), 24
Na nke abụọ, anyị ga-ewebata eserese ise na-egosipụta mma nke okike.
Ma anyị ma ndị na-ese ihe enweghị ike ite "dịka ọ bụ" okike.
A na-eme atụmatụ ọdịdị ala dị n'ime ya na kwaaji ya na omenaala ya, echiche ya na mmetụta nke onye ọ bụla nwere.
Biko nwee ekele maka ngosipụta nke ịma mma eke na ịma mma nke ndị na-ese ihe nwere n'ime obi ha.
Anwụ na-acha Yoshihiro Shimoda Amaghi afọ mmepụta 116.7 × 91 Ihe osise Japanese
Cloudgwé ojii ifuru ọhịa Nobuko Takato 1989 afọ 91 × 65.2 Ihe osise Japanese
ekpere Naoto Yamada Amaghi afọ mmepụta 45.5 × 61 Agba mmanụ
Mgbụsị akwụkwọ nke persimmon Nishida Tojiro Amaghi afọ mmepụta 91 × 116.7 Agba mmanụ
Fuki Hiroaki Anzai 1953 afọ 174 × 181 Ihe osise Japanese
Nke atọ: Dị ka ifuru - Showa Bijin-ga
Jenụwarị 2021th (Mọnde) -Machị 1st (Sọnde), 4
* Aplico na-emechi emechi ụbọchị.
N'ime oge nke atọ nke 2020, a ga-egosipụta eserese ụmụ nwanyị mara mma 3 na-egosi na aka ụmụ nwanyị nwere ahụ ike na ụmụ nwanyị mara mma nke gbatịrị agbatị.
Bijin-ga na-adọrọkarị na oge Meiji na Taisho lekwasịrị anya n'ịma mma nke ọdịdị ụmụ nwanyị.Biko attentionaa ntị na akụkụ ọhụrụ mara mma nke ụmụ nwanyị na-ebi na oge Showa karịa oge.
Gushiken Seiji "Izumi no Bank" Production afọ amaghi
N'akuku iyi Gushiken Holy Child Amaghi afọ mmepụta 227.3 × 181.8 Akwụkwọ agba?
Na-eche ọpụpụ (ndị na-agba egwu) Gushiken Holy Child Amaghi afọ mmepụta 218 × 152 Akwụkwọ agba?
Ihe osise Hiroaki Anzai 1942 afọ 120 × 90 Akwụkwọ agba?
Mmiri ọbịa Hiroaki Anzai 1954 afọ 227.3 × 181.8 Akwụkwọ agba?
Maiko Hiroaki Anzai 1935 afọ 168 × 180 Akwụkwọ agba?
Oge nke anọ: Nrọ ụmụ nwanyị
August 2021th (Tuesday) -December 3th (Tuesday), 23
N’agba nke anọ nke afọ 2020, anyị ga-ewebata ọrụ ndị na-ese ihe nwanyị bụ Keiko Gun na Yoshie Nakada.Keiko Gun na-ewepụta ọtụtụ eserese na-echetara gị akụkọ ifo.Tụkwasị na nke ahụ, Yoshie Nakada nọgidere na-ese ihe ndị dị ndụ na-acha odo odo na akara.
Ha abụọ biri ndụ n’otu oge na-ahọrọ iji nwa bebi e webatara na ihe ịchọ mma dị ka ihe eji eme ihe na eserese. Biko attentionaa ntị na nrọ na echiche uri nke ụmụ nwanyị abụọ na-ese ihe na-arọ nrọ na atelier dị ka nwa agbọghọ.
Yoshie Nakada "Ndụ Ka Na-aga (Aoi)" 1980
Usoro "Hong Kong" Keiko egbe Amaghi afọ mmepụta 73 × 91 Kanvas / mmanụ na kwaaji
Ncheta nke Hong Kong Keiko egbe Amaghi afọ mmepụta 162 × 97 Kanvas / mmanụ na kwaaji
Mmetụta nke Onfleur Keiko egbe Amaghi afọ mmepụta 162 × 97 Kanvas / mmanụ na kwaaji
Ndụ (uwe mwụda na-acha anụnụ anụnụ) Yoshie Nakada 1980 afọ 80.3 × 116.7 Kanvas / mmanụ na kwaaji
Ndụ ndụ Yoshie Nakada Ihe dịka 1980 116.7 × 80.3 Kanvas / mmanụ na kwaaji